साताको तस्वीर : महाशिवरात्रिमा पन्चकोट ! – ebaglung.com
२०७३ फाल्गुन १३, शुक्रबार १९:४१	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
संझना तामाङ / बागलुङ २०७३ फागुन १३ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा हामी विद्यामन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरु सर्वसिद्धिधाम पन्चकोटको अवलोकन गर्न पुग्यौँ ।
धार्मिक गन्तव्य स्थलकारुपमा विकसित हुँदै गएको बागलुङ नगरपालिका- ८ सर्वसिद्धिधाम पन्चकोटमा श्रद्धालुहरुको राम्रो उपस्थिति रहेको थियो ।
पन्चकोटमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणधीन अवस्थामा रहेका विविध योजनाहरु हेर्ने अवसर मिल्यो । हनुमानको प्रतिमा निर्माण भैरहेको थियो । हामीले पन्चकोटमा शिवजी (महादेव)को प्रतिमा भने देखेनौँ, निर्माण गरिदै होला ।
ठुला चरामाथि बसेका कृष्ण भगवान हुन ? भनेर एक जना श्रद्धालुलाई सोध्यौँ, तर उहाँ त सन्कनु पो भयो, “किन चाहियो तिमीहरुलाई, भगवान हुन् भैहाल्यो नि ।”
त्यसपछी हामीसग कसैलाई सोध्ने हिम्मत नै भएन । वरपर पुलिसहरु भए सोध्न हुन्थ्यो भनेर आँखा डुलायौँ तर हामीले पुलिसलाई देखेनौँ ।
त्यति राम्रो चिटिक्क परेको मन्दिरमा कुन भगवानको मुर्ति राख्ने होला ? भनेर जान्ने मन थियो । त्यो निर्माण भैरहेको मन्दिर कुन भगवानको हालो? भनेर बुझने मन थियो ।
ठुलोचराको तलको सानो कोठा भित्र के छ होला भनेर आँखा तान्यौँ, त्यस ठाउँमा जान पाइने रहेनछ । भित्तामा महालक्ष्मीको चित्र देख्यौँ र केमरा सानो ढोकाबाट भित्र पसालेर तस्वीर खिच्यौँ । त्यहाँ महालक्ष्मी बाहेक महाकाली र महासरस्वतीको चित्र देखेनौँ । हामीले ठ्याक्क चिन्ने हनुमानको मुर्तिमात्र थियो पन्चकोटमा ।
हामी जस्तै थुप्रै मानिसहरु त्यो रमणीय स्थल घुम्न पुगेका थिए । कति राम्रो बनेको रहेछ भनेर गुण गाईरहेका थिए । दक्षिण भारतीय शैलीमा निर्माण भएको रहेछ भनेर उनिहरुवीच कुरा भएको सुन्यौँ । तर दक्षिण भारतीय शैली भनेको के हो हामीलाई थाहा भएन । सरहरुलाई सोधौँला भनेर चित्त बुझायौँ ।
महाशिवरात्रिका दिन त्यहाँ भगवान शिवको पूजा भएको देखेनौँ । हाम्रो विद्यालयमा असोज महिनामा लगाएको धान्यान्चल महायज्ञ जस्तै त्यहा महायज्ञ सन्चालन भएको रहेछ । श्रद्धालुहरु भजनकीर्तन गरी नाँची रहेका थिए । महायज्ञमा सबैलाई सुजीको हलुवा प्रसाद बाँडिने रहेछ । हामीेले पनि दुईजना साथीलाई लाईनमा उभाएर हलुवा ल्याएर बाँडीचुँडी खायौँ । पन्चकोटबाट देखिने हिमश्रृंखला र प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्र गाउँहरुका दृश्यहरु अति नै रमणीय थिए ।
बागलुङ बजारदेखी पैदल हिँडेर हामी गन्तव्यमा पुगेका थियौँ । कक्षा ८ मा अध्ययनरत हामी छात्राहरु संझना तामाङ, रिया राजभण्डारी, अमिसा खत्री, दीपा पाण्डे, दीक्षा थापा, सुजाता जीसी, प्रतिमा पुन, अम्बिका आचार्य, मीठू थापा, ज्योति थापा, ममता भण्डारी, शर्मिला कँडेल, भिनिसा सापकोटा र आकृति थापा सहित हामीहरु पैदल जाँदा र फर्कदा निकै रमाईलो भयो ।
हामी सर्वसिद्धिधाम पन्चकोटमा पुगेपछी त्यहाँको दृश्यहरुले हामीहरु अत्यन्तै प्रभावित भयौँ । त्यहाँको सबैजसो ठाउँको दृश्यावलोकन ग-यौँ । निकट भविष्यमा अरुपनि थुप्रै कार्यहरु निर्माण गरिने कुरा हामीलाई जानकारी दिईयो । सर्वसिद्धिधाम पन्चकोटको अवलोकन गर्दा समय बितेको पत्तै भएन ।
पन्चकोट धाममा हामीले केहि दृश्यहरु खिचेका छौँ जस्लाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।